Vashandi vekuMinda yeNzimbe Votya Kurasikirwa neMabasa
Mudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe
Pave nekutyirwa kuti mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika Amai Mugabe, ekukurudzira kuti minda yenzimbe yekambani yeTongaat Hullet kuChiredzi itorwe anogona kukonzera dambudziko rekushomeka kweshuga munyika, uyewo kurasikirwa kwevashandi nemabasa.
Vachitaura pamusangano wevechidiki wakaitwa kuChinhoyi masvondo maviri adarika, Amai Mugabe, vakakumbira murume wavo VaRobert Mugabe, vanove mutungamiri wenyika, kuti madzimai emusangano we Zanu PF vabvumidzwe kutora minda ino rimwa nzimbe kubva kukambani yeTongaat Hullet iri kuChiredzi mudunhu reMasvingo senzira yekuendesa ivhu kuvatema.
Vashandi vazhinji vakamborasikirwa nemabasa apo vatsigiri veZanu PF vakatora minda yekambani iyi pakatanga chirongwa chekugoverwa kweminda patsva.
Varimi vatsva vakapiwa minda vanonzi vari kukundikana kubhadhara vashandi mari dzemihoro izvo zvinonzi zvave kuita kuti vazhinji vasiye mabasa uye vatange kutambura.
Mumwe mushandi aramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake anoti vave kutya kurasikirwa nemabasa avo mhuri dzavo dzigozotambura.
"Kutya kuripo nekuti totoziva kuti kutorwa kweminda kuripo sezvavakamboita tototyira kurasikirwa nemabasa uye mhuri dzedu kuti dzinozorarama sei. Hatitombozivi kuti tichaitasei."
Mutungamiriri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions( ZCTU ) VaPeter Mutasa vanoyambira Amai Mugabe kuti vasatore minda iyi nekuti vanosiya zviuru zvevashandi zvisisina mabasa.
"Tiri kushunguridzika zvakanyanyisa nekuti vanonzi vatungamiriri vave kuuraya Nyika. Tiri kunzwa kuti mashoko aya atotanga kuti vene vekambani vatange kushungurudzika uye vashandi vacharasikirwa nemabasa. Izvi zvichaita kuti tishaye mari yekunze inova yatinoda. Saka tiri kuzvitsoropodza zvakanyanyisa. Tiri kukurudzira kuti ruzhinji rweZimbabwe dai tati tose kwete kuti zvisatiparadzira nyika."
VaMutasa vaenderera mberi vachiti bato reZanu PF rakavimbisa kugadzira mabasa anosvika mamiriyoni maviri asi zvave kuratidza kuti rakakundikana, nekudaro havafaniri kuparadza mabasa mashoma asara munyika.
Nyanzvi dzezve hupfumi dzinoti Amai Mugabe nevamwe vavo vakabvumidzwa kutora minda yenzimbe kuChiredzi ne Triangle zvinogona kukanganisa hupfumi hwenyika sezvo kutengeswa kweshuga kunze kwenyika kuchipa nyika mari yekunze.
VaMandivenga Matutu nyanzvi yezveupfumi vachishanda vakazvimiririra, vanoti kugadzirwa kweshuga munyika kuchadzikira zvikuru nenyaya iyi.
"Maonere angu ndeekuti kutorwa kweminda neWomen’s League haisi kutorwa ichipiwa vanhu vanenge vaonekwa kuti vanogona kurima here, kuti production igoramba iripo sezvagara zvichiitika.Saka ndiri kutarisa kuti minda ichangotorwa sematorerwo akaitwa 2000 ekuti hatina kutarisa kuti watiri kupa ungava here ari murimi unozomendena production. Saka economy yedu inogona ku affectiwa sezvo veTongaat Hullet vachiendesa shuga yavo kuEuropean Union."
Kubva patanga chirongwa cheminda kambani yeTongaat Hullet yakatorerwa mapurazi, kugadzira kweshuga kwakaderera nezvikamu zvinosvika makumi mashanu kubva muzana.
Kambani iyi gore rapera yakaudza vatori venhau kuti gore rino inotarisira kugadzira shuga shoma inoita matani zviuru mazana mana neanoraudzira zvichienzaniswa nemamwe makore apo kambani iyi yaimbogadzira matani anopfuura zviuru mazana mapfumbamwe kana kusvika miriyoni.
Gore rakapfuura kambani iyi yakaita profiti yakadzikira yemadhora 2.3 mirioni kubva pamadhora mamiriyoni mapfumbamwe mugore re 2015, zvichikonzerwa nekutorwa kweminda nevatsigiri veZanu PF muna 2015 kuTriangle.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwe enyika VaArnold Batirai, vanoti zviri kukurudzirwa naAmai Mugabe kana ivo vakatorawo purazi zvinowedzera hupfumi hwavo kubva kuMazowe kusvika kuMasvingo.
"Aaah, zvinototikatyamadza kuti Mai Mugabe vanotora minda yenzimbe kuti vape Wome’s League. Mai Mugabe vanoda kutora minda yenzimbe kuti va increaze empire yavokubva kuMazowe kwavakatanga vachiti vari kuchengeta mhuka, asi iko zvino vatotora nedhamu ose. Saka chatave kutotyira ndechekuti madhamu ese ekuLowveld neminda vachapedzisira vatora."
Muzvare Adlaide Chikunguru vanoona nezvekufambiswa kwamashoko ku Tongaat Hullet varamba kutipa divi rekambani iyi panyaya iyi kunyangwe hazvo vakamboudza Studio 7 kuti inyore mibvunzo yayo itumire netsambambozha.
Kambani ye Tongaat ine vashandi vanopfuura zviuru makumi maviri.
Studio 7 yakundikanawo kunzwa divi reZanu PF panyaya iyi kuti tinzwe kana vachetevedzera kurudziro iyi.